ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားခဲ့ ကြတဲ့ ဘာကာ ၊ ရီးယဲ နဲ့ အေတီကို သတင်းတိုများ - SPORTS MYANMAR
ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားခဲ့ ကြတဲ့ ဘာကာ ၊ ရီးယဲ နဲ့ အေတီကို သတင်းတိုများ
ဒေါ့မွန်0–0ဘာစီလိုနာ
PSG3–0ရီးယဲ မက်ဒရစ်
အေတီကို2–2ဂျူဗင်တပ်
ဒီတစ်ပါတ် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် မှာတော့ အဓိက ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ ဟာ ပွဲချိန် 59 မိနစ် မှာ လူစားဝင် ပါဝင် ကစားခဲ့ ပေမယ့် ဘာကာ တို့ဟာ အဝေးကွင်း မှာ ရမှတ် တစ်မှတ် နဲ့သာ ကျေနပ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ပါဝင် ကစားခွင့် ရရှိ ခဲ့တဲ့ အန်းဆု ဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက်မှာ အသက် အငယ်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲထွက် ကစားသူ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ( 16 နှစ် 321 ရက် )
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ဘယ် နောက်ခံလူ ဂျော်ဒီ အယ်လ်ဘာ ဟာ ပွဲချိန် မိနစ် 40 မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ဒဏ်ရာ ကြောင့် သူဟာ 10 ရက် 15 ရက်ခန့် အနားယူ ရမယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
သတင်း တွေကတော့ အယ်လ်ဘာ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကြုံတွေ့ ခြင်းက ကစားသမား သစ် ဂျူနီယာ ဖီရ်ပို အတွက် အခွင့် အရေး တစ်ရပ် ရခြင်း ပဲလို့ အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အရာ ကို ဖော်ပြ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘာကာ တို့ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ ရပြီး ဂိုး သမား တာစတီဂျန် မှ အကောင်းဆုံး ကာကွယ် သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ တာစတီဂျန် ဟာ ချန်ပီယံ လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ6ကြိမ် အထိ ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့ ရပေမယ့်4ကြိမ် အထိ ကာကွယ် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ စပါယ်ရှယ် မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ရပ် ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်တွေ ကတော့ တာစတီဂျန် ပင်နယ်တီ ကာကွယ် ခဲ့တဲ့နောက် နူအာ နဲ့ ဂျိုအာချင်လို တို့ ဒါကို စောင့်ကြည့် နေကြ သလား ? ဘယ်သူက ဂျာမနီရဲ့ နံပါတ်တစ် ဂိုးသမား ဖြစ်သင့် သလဲ ဆိုတာ ကို မေးခွန်း ထုတ်သွား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှူး လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် မှာ ဂိုး မသွင်းယူ နိုင် ခဲ့တာ 19 ပွဲ အထိ ရှိလာ ခဲ့ ပါပြီ ။ ဆွာရက်ဇ် ဟာ 2015 ခုနှစ် ကတည်းက ချန်ပီယံလိဂ် အဝေးဂိုး လာဘ်ပိတ် နေခဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ရုန်းကန် ခဲ့ရတဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ဂရစ်ဇ်မန်း က သူဟာ အခု အချိန် မှာ မက်ဆီ ၊ ဆွာရက်ဇ် ၊ ဒမ်ဘီလီ တို့နဲ့ ကစားပုံ ကိုက်ညီ ဖို့ ကြိုးစား ညှိနှိုင်း နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပွဲစဉ် အပြီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်း နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒီ က သူတို့ ဟာ ပွဲစဉ် အတွင်း ပြိုင်ဖက် ရဲ့ ဖိအား ပေးမှု ကို ခံခဲ့ ရကြောင်း ဝန်ခံ ခဲ့ပြီး တာစတီဂျန် ဟာ ကြီးကျယ် ခမ်းနား တဲ့ ဂိုးသမား ဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် မက်ဆီ ဟာ ပြင်ဆင် မှုတွေ များစွာ မလုပ် ခဲ့ရ ပေမယ့် အသင်း အတွက် လုံလောက်စွာ ခြေစွမ်း ကောင်းပြ ကစား ပေးနိုင် ခဲ့ကြောင်း ဗယ်လ်ဗာဒီ က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပြိုင်ဖက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ မာကို ရူးစ် က သူဟာ ပင်နယ်တီ ကန်တာ ဆိုးရွား ခဲ့ကြောင်း ၊ တာစတီဂျန် ဟာ ခမ်းနား တဲ့ ဂိုး သမား ဖြစ်ကြောင်း လက်ရွေးစင် အသင်းဖော် ကို ချီးကျူး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
‘ ကျွန်တော် တုိ့ နှစ်မှတ်ပဲ ဆုံးရှုံး ခဲ့ ရတာပါ ။ နောက်ဆုံး မိနစ် မှာ မက်ဆီ ဂိုး မသွင်းနိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် ဘုရား သခင် ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ‘ လို့ ဒေါ့မွန် နောက်ခံလူ ဟမ်းမဲလ် က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား ဂန္ဓဝင် ရီကွယ်မီ က မက်ဆီ ကို ဘိုကာ ဂျူနီယာ အသင်း ရဲ့ ဂျာစီ နဲ့ မြင်တွေ့ ရဖို့ ဆိုတာ အိပ်မက် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား သစ် ဒီဂျောင် ဟာ ဗယ်လ်ဗာဒီ ထွက် ဆိုတဲ့ သတင်း တစ်ခု ကို Like ပေးခဲ့တယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ်7ပွဲဆက် အနိုင် ရယူ နိုင်ခြင်း မရှိ ခဲ့ပဲ 13 ဂိုး အထိ ပေးခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဒမ်ဘီလီ ဟာ ပဲရစ် ကို ပြန်သွားတယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဂရာနာဒါ အသင်း နဲ့ ကစား ရမယ့် ပွဲစဉ် အမီ ပြန်လာ ဖုို့ ရှိနေ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ လူငယ် နည်းပြ ကတော့ ကူဘို ဟာ မက်ဆီ နဲ့ ကစားပုံ ပိုမို တူပေမယ့် သူဟာ ဖာတီ ကိုသာ ပိုမို နှစ်သက် ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အကယ်လို့ ဇာဗီ သာ ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ နည်းပြ မလုပ် ခဲ့ရင် ကျွန်တော် သူ့ကို သတ်ပစ် မှာပါ ” လို့ အီတူး က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် လူငယ် ကစားသမားလေး ဖာတီ ကို ချီးကျူးရင်း ဂရစ်ဇ်မန်း ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်း မှာ ကစား နေရတာ ဖြစ်ကြောင်း အီတူး က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပီကေး ရဲ့ ဇနီးသည် ဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော် အဆိုတော် ရှာကီရာ က သားဖြစ်သူ ကို မတွေ့ရတာ တစ်လ ကျော်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒါဟာ တစ်ကယ့် ကို ခက်ခဲ တဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မိခင် တစ်ဦး ရဲ့ ခံစားချက် ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း အတွက် ဒီတစ်ပါတ်မှာ တိုက်စစ်ပိုင်း ကစားသမား အစုံအလင် နီးပါး ပါဝင် ခဲ့ကြ ပေမယ့် အဝေးကွင်းမှာ ပြင်သစ် ချန်ပီယံ PSG အသင်း ကို ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါဟာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း အတွက် တော့ 2006 ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ချန်ပီယံ လိဂ် အဖွင့် ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ 2009 ခုနှစ် တုန်းက အန်ဖီးလ် မှာ4–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ နောက်3ဂိုး အထိ ပေးခဲ ရပြီး ဂိုး မသွင်း နိုင် ခဲ့တဲ့ ပွဲ တစ်ပွဲ ကို ထပ်မံ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ကို ပါ့စ် ဒက်စ် ပရင့်စ် ကွင်းမှာ ဒဏ်ခတ် ခဲ့သူ ကတော့2ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ အန်ဂျယ် ဒီမားရီးယား ပဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဒီနွေ PSG အသင်း ဆီ ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ကေလာ နာဗတ်စ် ဟာလည်း အသင်း ဟောင်းနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည် ရင်ဆိုင် ခဲ့ ရတဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ပျော်ရွှင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ရီးယဲ တို့ ဂိုးတွေ ရရှိ ခဲ့ ပေမယ့် လူကျွံဘော အဖြစ် သတ်မှတ် ခံခဲ့ ရတာ ကြောင့် နစ်နာ ခဲ့ကြ ရ ပါတယ် ။ ပွဲစဉ် အတွင်း ကောင်းမွန် တဲ့ လက်စွမ်း တွေ မပြသ နိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ ကော့တွိုက်စ် ကိုတော့ ပရိသတ် တွေ အတော်လေး စိတ်ပျက် နေခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
ကော့တွိုက်စ် ဟာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း အတွက် 57 ပွဲ ကစား ပေးထား ခဲ့ပြီး 81 ဂိုး အထိ ပေးထား ခဲ့ ရတဲ့ မှတ်တမ်း ဆိုး တစ်ရပ် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ရ ပါပြီ ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ မော်ရင်ဟို ဟာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ပြန်လည် ဖြစ်လာ နိုင်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေ ပြန်လည် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ခံစစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ကာဆီမီရို က ပေးစရာ ဆင်ခြေ မရှိ တော့ကြောင့် စိတ်ပျက် လက်ပျက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နောက်ခံလူ ရီယို ဖာဒီနန် ကတော့ ဟာဇက် ဟာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဆီ မှားယွင်း တဲ့ အချိန် တစ်ခု မှာ ပြောင်းရွှေ့ သွားတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ် မျိုး ဖြစ်လာမှာ ကို စိုးရိမ် မိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ အသင်း ဟာ သူ မျှော်လင့် ထားတဲ့ အဆင့် တစ်ခု မှာ ရှိ မနေ ကြောင်း ၊ PSG အသင်း ဖက်က ကစား တာ တစ်ကယ် ပဲ ကောင်းမွန် ခဲ့ကြောင်း ရီးယဲ နည်းပြ ဇီဒန်း က ဝန်ခံ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ နံပါတ် 14 ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ဂူတီ က ပြိုင်ဖက် အသင်း ဖက်မှာ နေမာ ၊ အမ်ဘက်ပီ နဲ့ ကာဗာနီ တို့ မပါဝင် နိုင်တဲ့ အချိန်3–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခြင်းက ဆိုးရွား လွန်းတဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း အသင်း ဟောင်း အပေါ် ဝေဖန် ထိုးနှက် သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပီတာ ခရော့ခ်ျ ကတော့ ဂါးရတ် ဘေးလ် ဟာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဖက်မှ ပေးနေ ခဲ့တာ ထက် ပိုပြီး လေးစား မှု ရရှိ ဖို့ ထုိုက်တန် သူ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ရှုံးပွဲ ကြုံတွေ ခဲ့ရ ပေမယ့် နည်းပြ ဇီဒန်း ဆီက ထောက်ပံ့ ပေးမှု တွေကို ဆက်လက် ရရှိ ပါက သူဟာ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင် လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည် ကြောင်း ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ် ရိုဒရီဂွက် က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ နံပါတ် တစ် ဂိုးသမား ဖြစ်သူ သီဘောက် ကော့တွိုက်စ် ကတော့ ဒီမားရီးယား ဟာ ပါရမီ ကောင်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြိုင်ဖက် အသင်း က ပွဲစဉ် ကို အရှိန် ကောင်းကောင်း စတင် နိုင်ခဲ့ ခြင်းက အခုလို ရလဒ် ဆိုးစေ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ ဇီဒန်း က စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်း နေတဲ့ ကော့တွိုက်စ် ကို အပြစ်တင် ဖို့ ငြင်းဆန် ခဲ့ပြီး သူတို့ အားလုံး က တစ်လှေ တည်းစီး တစ် ခရီး တည်း သွားနေ ကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
သတင်း အချို့ ကတော့ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ ခံစစ် က အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာမို့စ် မပါဝင် နိုင်တဲ့ ဒဏ်ကို ခံစား ခဲ့ရ တယ်လို့ ဖော်ပြ နေကြ ပါတယ် ။
အေတီကို အသင်း ကတော့ ချန်ပီယံ လိဂ် အုပ်စု အဖွင့် ပွဲစဉ် မှာ ချန်ပီယံ လိဂ် မကျေပွဲ အဖြစ် ဂျူဗင်တပ် အသင်း ကို အိမ်ကွင်း မှာ ဧည့်ခံ ကစား ခဲ့ ပေမယ့် တစ်ဖက် နှစ်ဂိုး စီ သရေ ရလဒ် သာ ထွက်ပေါ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အေတီကို အတွက် ခြေပ ဂိုးတွေ ကိုတွေ နောက်ခံလူ ဆာဗစ် နဲ့ လူစားဝင် ကစားပေး ခဲ့ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဟတ်တာ ဟာရဲရား တို့က သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ပွဲချိန် တစ်လျောက် ကစားပုံ ကောင်းမွန် ခဲ့သလို ဒုတိယမြောက် ခြေပဂိုး ကို ဖန်တီး ပေးသွားနိုင် ခဲ့တဲ့ ကစားသမား သစ် ကီရန် ထရစ်ပီးယား က ပွဲစဉ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ( All Football )
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီး မှာတော့ ဂျူဗင်တပ် အသင်း ဖက်က အလွတ် တည်ကန်ဘော တွေမှ တစ်ဆင့် ဂိုးတွေ ပေးလိုက် ရခြင်းက စိတ်ပျက် စရာ ကောင်းလွန်း ခဲ့ကြောင်း အသင်း ခေါင်းဆောင် ဘိုနူချီ က ငြီးတွား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အေတီကို နည်းပြ ဆီမြွန်နီ ကတော့ ဒီ သရေ ရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကောင်းတယ် ၊ ဆိုးတယ် လို့ ဆိုတဲ့ စိတ် ခံစားချက် မျိုး မရှိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် နှစ်ဂိုး ပေးခဲ့ ရတဲ့ နောက် အရှုံး မပေး တဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ ကစားသမား တွေရဲ့ ခံယူချက် ကို ကျေနပ် မိကြောင်း ဆီမြွန်နီ က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် ကတော့ နောက်ဆုံး မိနစ် မှာ ခြေပဂိုး သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား သစ် ဟတ်တာ ဟာရဲရား အတွက် တစ်ကယ့် ကို အမှတ်တရ ပွဲစဉ် ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ သူဟာ အသင်း အတွက် ပထမဆုံး ကစား ပေတဲ့ ပွဲစဉ် မှာတဲ့ အရေးပါတဲ့ ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ သူ လုပ်ပြ ခဲ့တဲ့ လက် အမူအရာ က ‘ လေ့လာ သင်ယူ ဖို့ ၊ ခင်ဗျား တို့ လေ့လာ သင်ယူ ဖို့ လိုအပ် သေးတယ် ‘ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ကြောင်း စီ ရော်နယ်ဒို က ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲမှာ ရလဒျတှေ ဆိုးရှားခဲ့ ကွတဲ့ ဘာကာ ၊ ရီးယဲ နဲ့ အတေီကို သတငျးတိုမြား
ဒေါ့မှနျ0–0ဘာစီလိုနာ
PSG3–0ရီးယဲ မကျဒရဈ
အတေီကို2–2ဂြူဗငျတပျ
ဒီတဈပါတျ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျ မှာတော့ အဓိက ကစားသမား ဖွဈတဲ့ မကျဆီ ဟာ ပှဲခြိနျ 59 မိနဈ မှာ လူစားဝငျ ပါဝငျ ကစားခဲ့ ပမေယျ့ ဘာကာ တို့ဟာ အဝေးကှငျး မှာ ရမှတျ တဈမှတျ နဲ့သာ ကနြေပျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ ပါဝငျ ကစားခှငျ့ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အနျးဆု ဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ သမိုငျး တဈလြောကျမှာ အသကျ အငယျဆုံး ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲထှကျ ကစားသူ အဖွဈ မှတျတမျးဝငျ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ( 16 နှဈ 321 ရကျ )
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ဘယျ နောကျခံလူ ဂြျောဒီ အယျလျဘာ ဟာ ပှဲခြိနျ မိနဈ 40 မှာ ဒဏျရာ ရရှိ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ဒဏျရာ ကွောငျ့ သူဟာ 10 ရကျ 15 ရကျခနျ့ အနားယူ ရမယျ လို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။
သတငျး တှကေတော့ အယျလျဘာ ဒဏျရာ ပွသနာ ကွုံတှေ့ ခွငျးက ကစားသမား သဈ ဂြူနီယာ ဖီရျပို အတှကျ အခှငျ့ အရေး တဈရပျ ရခွငျး ပဲလို့ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျတဲ့ အရာ ကို ဖျောပွ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ဘာကာ တို့ ပငျနယျတီ ပေးခဲ့ ရပွီး ဂိုး သမား တာစတီဂနျြ မှ အကောငျးဆုံး ကာကှယျ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ တာစတီဂနျြ ဟာ ခနျြပီယံ လိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ6ကွိမျ အထိ ပငျနယျတီ ပေးခဲ့ ရပမေယျ့4ကွိမျ အထိ ကာကှယျ ထားနိုငျ ခဲ့တဲ့ စပါယျရှယျ မှတျတမျးကောငျး တဈရပျ ပိုငျဆိုငျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ ပရိသတျတှေ ကတော့ တာစတီဂနျြ ပငျနယျတီ ကာကှယျ ခဲ့တဲ့နောကျ နူအာ နဲ့ ဂြိုအာခငျြလို တို့ ဒါကို စောငျ့ကွညျ့ နကွေ သလား ? ဘယျသူက ဂြာမနီရဲ့ နံပါတျတဈ ဂိုးသမား ဖွဈသငျ့ သလဲ ဆိုတာ ကို မေးခှနျး ထုတျသှား ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ အဓိက တိုကျစဈမှူး လူးဝဈ ဆှာရကျဇျ ဟာ ခနျြပီယံလိဂျ အဝေးကှငျး ပှဲစဉျ မှာ ဂိုး မသှငျးယူ နိုငျ ခဲ့တာ 19 ပှဲ အထိ ရှိလာ ခဲ့ ပါပွီ ။ ဆှာရကျဇျ ဟာ 2015 ခုနှဈ ကတညျးက ခနျြပီယံလိဂျ အဝေးဂိုး လာဘျပိတျ နခေဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ ရုနျးကနျ ခဲ့ရတဲ့ ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူးသဈ ဂရဈဇျမနျး က သူဟာ အခု အခြိနျ မှာ မကျဆီ ၊ ဆှာရကျဇျ ၊ ဒမျဘီလီ တို့နဲ့ ကစားပုံ ကိုကျညီ ဖို့ ကွိုးစား ညှိနှိုငျး နဆေဲ ဖွဈကွောငျး ဝနျခံ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပှဲစဉျ အပွီးမှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသငျး နညျးပွ ဗယျလျဗာဒီ က သူတို့ ဟာ ပှဲစဉျ အတှငျး ပွိုငျဖကျ ရဲ့ ဖိအား ပေးမှု ကို ခံခဲ့ ရကွောငျး ဝနျခံ ခဲ့ပွီး တာစတီဂနျြ ဟာ ကွီးကယျြ ခမျးနား တဲ့ ဂိုးသမား ဖွဈကွောငျး ခြီးကြူး သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ မကျဆီ ဟာ ပွငျဆငျ မှုတှေ မြားစှာ မလုပျ ခဲ့ရ ပမေယျ့ အသငျး အတှကျ လုံလောကျစှာ ခွစှေမျး ကောငျးပွ ကစား ပေးနိုငျ ခဲ့ကွောငျး ဗယျလျဗာဒီ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပွိုငျဖကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ မာကို ရူးဈ က သူဟာ ပငျနယျတီ ကနျတာ ဆိုးရှား ခဲ့ကွောငျး ၊ တာစတီဂနျြ ဟာ ခမျးနား တဲ့ ဂိုး သမား ဖွဈကွောငျး လကျရှေးစငျ အသငျးဖျော ကို ခြီးကြူး သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
‘ ကြှနျတျော တုိ့ နှဈမှတျပဲ ဆုံးရှုံး ခဲ့ ရတာပါ ။ နောကျဆုံး မိနဈ မှာ မကျဆီ ဂိုး မသှငျးနိုငျ ခဲ့တဲ့ အတှကျ ဘုရား သခငျ ကို ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ ‘ လို့ ဒေါ့မှနျ နောကျခံလူ ဟမျးမဲလျ က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အာဂငျြတီးနား ဂန်ဓဝငျ ရီကှယျမီ က မကျဆီ ကို ဘိုကာ ဂြူနီယာ အသငျး ရဲ့ ဂြာစီ နဲ့ မွငျတှေ့ ရဖို့ ဆိုတာ အိပျမကျ တဈခု ဖွဈကွောငျး ဝနျခံ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား သဈ ဒီဂြောငျ ဟာ ဗယျလျဗာဒီ ထှကျ ဆိုတဲ့ သတငျး တဈခု ကို Like ပေးခဲ့တယျ လို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ဟာ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ အဝေးကှငျး ပှဲစဉျ7ပှဲဆကျ အနိုငျ ရယူ နိုငျခွငျး မရှိ ခဲ့ပဲ 13 ဂိုး အထိ ပေးခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ ဒမျဘီလီ ဟာ ပဲရဈ ကို ပွနျသှားတယျ လို့ သိရှိ ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ ဂရာနာဒါ အသငျး နဲ့ ကစား ရမယျ့ ပှဲစဉျ အမီ ပွနျလာ ဖုို့ ရှိနေ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ လူငယျ နညျးပွ ကတော့ ကူဘို ဟာ မကျဆီ နဲ့ ကစားပုံ ပိုမို တူပမေယျ့ သူဟာ ဖာတီ ကိုသာ ပိုမို နှဈသကျ ကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အကယျလို့ ဇာဗီ သာ ဘာစီလိုနာ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ မလုပျ ခဲ့ရငျ ကြှနျတျော သူ့ကို သတျပဈ မှာပါ ” လို့ အီတူး က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ လူငယျ ကစားသမားလေး ဖာတီ ကို ခြီးကြူးရငျး ဂရဈဇျမနျး ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောငျးဆုံး အသငျး မှာ ကစား နရေတာ ဖွဈကွောငျး အီတူး က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပီကေး ရဲ့ ဇနီးသညျ ဖွဈတဲ့ နာမညျကြျော အဆိုတျော ရှာကီရာ က သားဖွဈသူ ကို မတှရေ့တာ တဈလ ကြျောပွီ ဖွဈကွောငျး ၊ ဒါဟာ တဈကယျ့ ကို ခကျခဲ တဲ့ အရာ တဈခု ဖွဈကွောငျး မိခငျ တဈဦး ရဲ့ ခံစားခကျြ ကို ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး အတှကျ ဒီတဈပါတျမှာ တိုကျစဈပိုငျး ကစားသမား အစုံအလငျ နီးပါး ပါဝငျ ခဲ့ကွ ပမေယျ့ အဝေးကှငျးမှာ ပွငျသဈ ခနျြပီယံ PSG အသငျး ကို ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒါဟာ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး အတှကျ တော့ 2006 ခုနှဈ နောကျပိုငျး ပထမဆုံး အကွိမျ အဖွဈ ခနျြပီယံ လိဂျ အဖှငျ့ ပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ရခွငျး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ဟာ 2009 ခုနှဈ တုနျးက အနျဖီးလျ မှာ4–0ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့တဲ့ နောကျ3ဂိုး အထိ ပေးခဲ ရပွီး ဂိုး မသှငျး နိုငျ ခဲ့တဲ့ ပှဲ တဈပှဲ ကို ထပျမံ ပိုငျဆိုငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ကို ပါ့ဈ ဒကျဈ ပရငျ့ဈ ကှငျးမှာ ဒဏျခတျ ခဲ့သူ ကတော့2ဂိုး သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ အနျဂယျြ ဒီမားရီးယား ပဲ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ဒီနှေ PSG အသငျး ဆီ ပွောငျးရှေ့ သှားတဲ့ ကလော နာဗတျဈ ဟာလညျး အသငျး ဟောငျးနဲ့ ပထမဆုံး အကွိမျ ပွနျလညျ ရငျဆိုငျ ခဲ့ ရတဲ့ ပှဲစဉျ မှာ ပြျောရှငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ ရီးယဲ တို့ ဂိုးတှေ ရရှိ ခဲ့ ပမေယျ့ လူကြှံဘော အဖွဈ သတျမှတျ ခံခဲ့ ရတာ ကွောငျ့ နဈနာ ခဲ့ကွ ရ ပါတယျ ။ ပှဲစဉျ အတှငျး ကောငျးမှနျ တဲ့ လကျစှမျး တှေ မပွသ နိုငျခဲ့ ကွတဲ့ ကော့တှိုကျဈ ကိုတော့ ပရိသတျ တှေ အတျောလေး စိတျပကျြ နခေဲ့ ကွ ပါတယျ ။
ကော့တှိုကျဈ ဟာ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး အတှကျ 57 ပှဲ ကစား ပေးထား ခဲ့ပွီး 81 ဂိုး အထိ ပေးထား ခဲ့ ရတဲ့ မှတျတမျး ဆိုး တဈရပျ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ ရ ပါပွီ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ မျောရငျဟို ဟာ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ပွနျလညျ ဖွဈလာ နိုငျမလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး တှေ ပွနျလညျ ထှကျပျေါ လာခဲ့ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ ခံစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ ကာဆီမီရို က ပေးစရာ ဆငျခွေ မရှိ တော့ကွောငျ့ စိတျပကျြ လကျပကျြ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နောကျခံလူ ရီယို ဖာဒီနနျ ကတော့ ဟာဇကျ ဟာ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ဆီ မှားယှငျး တဲ့ အခြိနျ တဈခု မှာ ပွောငျးရှေ့ သှားတယျ ဆိုတဲ့ အဖွဈ မြိုး ဖွဈလာမှာ ကို စိုးရိမျ မိကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ အသငျး ဟာ သူ မြှျောလငျ့ ထားတဲ့ အဆငျ့ တဈခု မှာ ရှိ မနေ ကွောငျး ၊ PSG အသငျး ဖကျက ကစား တာ တဈကယျ ပဲ ကောငျးမှနျ ခဲ့ကွောငျး ရီးယဲ နညျးပွ ဇီဒနျး က ဝနျခံ ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ နံပါတျ 14 ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ဂူတီ က ပွိုငျဖကျ အသငျး ဖကျမှာ နမော ၊ အမျဘကျပီ နဲ့ ကာဗာနီ တို့ မပါဝငျ နိုငျတဲ့ အခြိနျ3–0ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ခွငျးက ဆိုးရှား လှနျးတဲ့ အရာ တဈခု ဖွဈကွောငျး အသငျး ဟောငျး အပျေါ ဝဖေနျ ထိုးနှကျ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပီတာ ခရော့ချြ ကတော့ ဂါးရတျ ဘေးလျ ဟာ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ဖကျမှ ပေးနေ ခဲ့တာ ထကျ ပိုပွီး လေးစား မှု ရရှိ ဖို့ ထုိုကျတနျ သူ ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ရှုံးပှဲ ကွုံတှေ ခဲ့ရ ပမေယျ့ နညျးပွ ဇီဒနျး ဆီက ထောကျပံ့ ပေးမှု တှကေို ဆကျလကျ ရရှိ ပါက သူဟာ တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ လှတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တဈခု ကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျ လိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျ ကွောငျး ကှငျးလယျ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ ဂြိမျးဈ ရိုဒရီဂှကျ က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ နံပါတျ တဈ ဂိုးသမား ဖွဈသူ သီဘောကျ ကော့တှိုကျဈ ကတော့ ဒီမားရီးယား ဟာ ပါရမီ ကောငျးတဲ့ ကစားသမား တဈဦး ဖွဈကွောငျး ၊ ပွိုငျဖကျ အသငျး က ပှဲစဉျ ကို အရှိနျ ကောငျးကောငျး စတငျ နိုငျခဲ့ ခွငျးက အခုလို ရလဒျ ဆိုးစေ ခဲ့ကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ ဇီဒနျး က စှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျး နတေဲ့ ကော့တှိုကျဈ ကို အပွဈတငျ ဖို့ ငွငျးဆနျ ခဲ့ပွီး သူတို့ အားလုံး က တဈလှေ တညျးစီး တဈ ခရီး တညျး သှားနေ ကွတဲ့ သူတှေ ဖွဈကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
သတငျး အခြို့ ကတော့ ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ရဲ့ ခံစဈ က အသငျး ခေါငျးဆောငျ ရာမို့ဈ မပါဝငျ နိုငျတဲ့ ဒဏျကို ခံစား ခဲ့ရ တယျလို့ ဖျောပွ နကွေ ပါတယျ ။
အတေီကို အသငျး ကတော့ ခနျြပီယံ လိဂျ အုပျစု အဖှငျ့ ပှဲစဉျ မှာ ခနျြပီယံ လိဂျ မကပြှေဲ အဖွဈ ဂြူဗငျတပျ အသငျး ကို အိမျကှငျး မှာ ဧညျ့ခံ ကစား ခဲ့ ပမေယျ့ တဈဖကျ နှဈဂိုး စီ သရေ ရလဒျ သာ ထှကျပျေါ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အတေီကို အတှကျ ခွပေ ဂိုးတှေ ကိုတှေ နောကျခံလူ ဆာဗဈ နဲ့ လူစားဝငျ ကစားပေး ခဲ့ရတဲ့ ကှငျးလယျလူ ဟတျတာ ဟာရဲရား တို့က သှငျးယူ ပေးခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ပှဲခြိနျ တဈလြောကျ ကစားပုံ ကောငျးမှနျ ခဲ့သလို ဒုတိယမွောကျ ခွပေဂိုး ကို ဖနျတီး ပေးသှားနိုငျ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား သဈ ကီရနျ ထရဈပီးယား က ပှဲစဉျ ရဲ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမား ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ( All Football )
အဆိုပါ ပှဲစဉျ အပွီး မှာတော့ ဂြူဗငျတပျ အသငျး ဖကျက အလှတျ တညျကနျဘော တှမှေ တဈဆငျ့ ဂိုးတှေ ပေးလိုကျ ရခွငျးက စိတျပကျြ စရာ ကောငျးလှနျး ခဲ့ကွောငျး အသငျး ခေါငျးဆောငျ ဘိုနူခြီ က ငွီးတှား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အတေီကို နညျးပွ ဆီမွှနျနီ ကတော့ ဒီ သရေ ရလဒျနဲ့ ပတျသကျလို့ ကောငျးတယျ ၊ ဆိုးတယျ လို့ ဆိုတဲ့ စိတျ ခံစားခကျြ မြိုး မရှိကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ နှဈဂိုး ပေးခဲ့ ရတဲ့ နောကျ အရှုံး မပေး တဲ့ စိတျဓါတျ နဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျပှဲ ဝငျခဲ့ ကွတဲ့ ကစားသမား တှရေဲ့ ခံယူခကျြ ကို ကနြေပျ မိကွောငျး ဆီမွှနျနီ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ ကတော့ နောကျဆုံး မိနဈ မှာ ခွပေဂိုး သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ ကစားသမား သဈ ဟတျတာ ဟာရဲရား အတှကျ တဈကယျ့ ကို အမှတျတရ ပှဲစဉျ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ သူဟာ အသငျး အတှကျ ပထမဆုံး ကစား ပတေဲ့ ပှဲစဉျ မှာတဲ့ အရေးပါတဲ့ ဂိုး သှငျးယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ သူ လုပျပွ ခဲ့တဲ့ လကျ အမူအရာ က ‘ လလေ့ာ သငျယူ ဖို့ ၊ ခငျဗြား တို့ လလေ့ာ သငျယူ ဖို့ လိုအပျ သေးတယျ ‘ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျ ဖွဈကွောငျး စီ ရျောနယျဒို က ရှငျးလငျး ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။